Igumbi lokulala elithandekayo eli-2 kufutshane nolwandle. App#2 - I-Airbnb
Igumbi lokulala elithandekayo eli-2 kufutshane nolwandle. App#2
Iflethi entsha ethandekayo kwindawo yabakhenkethi kufutshane neLe Meridian Resort. 70 sq.m. 200 yeemitha ukuya elunxwemeni.Umgangatho wesibini. Kukho iibhedi ezimbini ezinkulu kule flat. Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle. I-balkon i malunga ne-7 sq.m. Indawo yokupaka yabucala. Iqula lokuqubha. Ikhotjiyethenisi
При заезде вносится возвратный депозит 100 евро за сохранность имущества.
Ekufikeni, idiphozithi ebuyiselwayo ye-euro eyi-100 yenzelwe ukhuseleko lwepropati.
Intlawulo yamanzi asetyenzisiweyo kunye nombane iqhutyelwa ngokweemitha, ayifakwanga kwiindleko zokuphila kwaye ihlawuliswa ukongezwa.
Intlawulo yamanzi asetyenzisiweyo kunye nombane iqhutywe ngamakhawunta ayifakwanga kwiindleko zokuphila kwaye ihlawuliswa ukongezwa.
Ndilindele imibuzo yakho, ndingathi:
Indawo yabakhenkethi ezolileyo kakhulu.
Ukuya elunxwemeni olunesanti, hamba imizuzu emi-4 kwisitrato esizolileyo udlula ihotele yaseLe Meridian.
Kufuphi, kumgama wokuhamba, kukho iivenkile, iikhemesti, iindawo zokutyela ezininzi.
Kufuphi nolwandle kukho: I-Watersport (ijet skis, izikhitshane, i-parasailing, i-canoeing), indawo yokutyela ebalaseleyo elunxwemeni, indawo yokupaka iiyachts zabucala kunye nezikhephe.
Amanzi elunxwemeni acoceke kakhulu, acoceke kakhulu kunombindi weLimassol.
Ukumisa ibhasi ukuya esixekweni - 2 min ukuhamba.
Idama lokuqubha kwintsimi ye-complex, i-2 min ukuhamba, ubunzulu be-80-120cm. Ibala elincinci lokudlala, iindawo zokuhlala ekwabelwana ngazo elangeni. Ikhotjiyethenisi.Indlu ikumgangatho wesibini. (Ngokutsho kwe-akhawunti yaseRashiya).
Akukho lift endlwini.(3 floor building) Abamelwane bazolile.
I-Intanethi kwigumbi elinemodyuli yeWi-Fi. Isantya silungile.
Intsimbi, isomisi seenwele, ibhodi ye-ironing, iiseti ezi-2 zelinen yelinen, isethi yezitya, iimbiza, iipani, i-kettle, iitawuli - ewe!
Akukho matshini wokuhlamba izitya!
Ngelishwa, andiboneleli ngeebhedi !!!
Ukupaka imoto kubucala, kusimahla, kufutshane nomnyango, iifestile zendlu zijongana ngenye indlela.Мест много.
Iinkcukacha ezongezelelweyo :
Ukuya kunxweme olunesanti, hamba imizuzu emi-4 kwisitrato esizolileyo udlula iPark Lane Hotel & Spa.
Kufuphi kumgama wokuhamba kukho iivenkile, iikhemesti, iindawo zokutyela ezininzi.
Kufuphi nolwandle kukho: I-Watersport (ijet skis, izikhitshane, i-parasailing, i-canoeing), indawo entle yokutyela engaselunxwemeni, indawo yokupaka iiyachts zabucala kunye nezikhephe.
I-pool kwi-complex, imizuzu emi-2 ngeenyawo, ubunzulu be-80-120cm.Ibala lokudlala elincinane, iindawo zokuhlala elangeni ekwabelwana ngazo. Ikhotjiyethenisi. Indlu ikumgangatho wesibini. (Ngokutsho kwe-akhawunti yaseRashiya).
Akukho lift endlwini. (3 isakhiwo somgangatho) Abamelwane bazolile.
I-Intanethi inokufumaneka xa uyicelile!
Intsimbi, i-hairdryer, i-ironing board, iiseti ezi-2 zelinen yelinen, isethi yezitya, iimbiza, iipani, i-kettle, iitawuli - kukho!
Iibhedi, ngelishwa andiboneleli !!!
Ukupaka imoto kubucala, kusimahla, kufutshane nomnyango, iifestile zendlu zijongana ngenye indlela. Zininzi iindawo, zonke zisimahla.
Eyona ndawo ithuleyo nenoxolo eLimassol. Ngabakhenkethi kuphela. Le ndawo yeyona ndawo ithuleyo yeLimassol.Indawo yoKhenketho.
Kutshanje kuqale ukwakhiwa kwendawo entsha yokuhlala "iklabhu yeMillioner" ngaphaya kwendlela.Ezinye iindwendwe ziqaphela ukungonwabi kokusebenza koomatshini.
Kungekudala, ukwakhiwa kwendawo entsha yokuhlala "i-Millionaire Club" iqalile ngaphesheya kwesitrato ukusuka kumagumbi. Ezinye iindwendwe ngamanye amaxesha zixela ukungonwabi kule misebenzi.